★မြန်မာ့အလင်း★: ကွဲစရာအရှက်၊ ကျစရာသိက္ခာမရှိတဲ့ ကျွန်ကုလား (၁)
ဘာသာအားလုံးအတူတူပဲဆိုတာ စာမဖတ်တဲ့သူတွေ၊ ဦးဏှောက်မရှိတဲ့သူတွေ နဲ့ စဉ်းစားဥာဏ်မရှိတဲ့သူတွေ ပြောတဲ့ စကားသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထားကို အများကြီးပြုပြင်ပေးပါတယ်။ ဘာသာတွေထဲမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုသာ မေတ္တာတရားပေါ်မှာ အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပြောလို့ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာတွေကို မကောင်းဆိုးဝါး ဘာသာလို့ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာရှိနေခြင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သန့်ရှင်းရေးအတွက် လိုအပ်တယ်လို့လဲ ယူဆထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ လူလူခြင်း မေတ္တာထားဖို့ သင်ကြားချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာ ခရစ်ယာန်လူငယ်တွေကို တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို လူသားအကျိုးပြုနေတဲ့ လူငယ်တွေ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ဘာအတွက် မလိုမုန်းထားရမှာလဲ?
မွတ်ဆလင်ကိုးကွယ်နေတဲ့သူမှန်သမျှ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရန်သူလို့ပဲ သဘောထားပါတယ်။ (မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ ကုလားကို မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ မြင်ပေးမယ်။) ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မွတ်ဆလင်သင်ကြားချက်တွေဟာ အရမ်းကို အောက်တန်းကျလွန်းပြီး ယုတ်ညံ့လွန်းလို့ပါ။ သတ်ဖြတ်ဖို့၊ လိမ်ညာဖို့၊ ခိုးဝှက်ဖို့၊ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ စတဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်မှန်သမျှ သင်ကြားပေးပါတယ်။ အဲလိုသင်ကြား ခံထားရတဲ့ ကျွန်ကုလားတွေ လူစိတ်ပျောက်ကုန်တာပေါ့။အရှက်နဲ့ သိက္ခာတွေ နထ္ထိဖြစ်ကုန်သည်။ မြန်မာဘလော့လောကမှာ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဟာ ပြုတ်လုဆဲဆဲသာ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျွန်ကုလားတွေဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့ဝါဒကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုတာ သိထားကြပါတယ်။ အစပိုင်းကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် အမျိုးမျိုး ဟန်ဆောင်လိမ်ညာပြီး သူတို့ ဘာသာကို မဝေဖန်အောင် ဟန့်တားခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့လဲ ၇န်တိုက်ပေးတာတွေ လုပ်ခဲ့ကျပါတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းတွေကလည်း အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ ပိုမိုပြီး ယုတ်ညံ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေကြလေရော။ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ အမှန်တကယ်ထင်အောင်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တချို့ကို လေ့လာ။ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘလော့အတု တစ်ခုကို ဖန်တီးပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကို အင်မတန်ကြည်ညိုလေးစားသူ အဖြစ်နဲ့ စတင်ပြီး လိမ်ညာလှည့်ဖျားဖို့ ကြိုးစားလာပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်ကုလားတွေလိမ်ထားသမျှ ချက်ချင်းကို ပေါ်တာပါပဲ။ သူတို့သုံးထားတဲ့နာမည်က "မြတ်သူ"။ “မိုးကုတ်နည်းနဲ့ စိတ္တာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန်” လုပ်နေတဲ့သူဆိုပြီး မိတ်ဆက်တယ်ဗျာ။ စာအုပ်ဖတ်ပြီး ရေးပြတာ သိသာလွန်းတယ်။ ကျုပ်တို့ အချင်းချင်းပြောရင် တရားမှတ်တယ်၊ ၀ိပဿနာ လုပ်တယ် စသဖြင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ပြောဆိုပါတယ်။ သူ့ကျမှ မိုးကုတ်နည်းတွေ ဘာတွေ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲ။
မေတ္တာ နာမည်နဲ့ “ယခုရောက်လာသူအပေါင်း ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ” ဆိုတဲ့စာကြောင်းတွေ အများကြီးရေးပြီး ကျွန်ကုလားတွေကို ဆဲထားတဲ့စာတွေ ဖတ်မရအောင်လုပ်နေတာ လူတိုင်းသတိထားမိမှာပါ။ အဲဒီစာကြောင်းကို "မြတ်သူ"နာမည်နဲ့မှားယွင်းပြီး ရေးမိလိုက်ရှာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျုပ်ကလဲ မင်းနဲ့ မေတ္တာနဲ့က တစ်ကောင်ထည်းလား? လူတစ်ယောက်ထဲက နာမည်အမျိုးမျိုးသုံးပြီး ရေးနေရင်တော့ ၀ိပဿနာသမား မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ မေတ္တာက သူမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ပိတကတ်ကျမ်းနဲ့ညီလို့ “မေတ္တာ” ရေးထားတဲ့ စာကို ကော်ပီကူးပြတာဆိုပဲ။ တော်တော်ရယ်စရာကောင်းတာပဲ။ ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကြိုက်သလို မေတ္တာပို့လို့ရတာ မသိရှာဘူး။ အဲဒါကိုထောက်ပြတော့ ပိတကတ်မဟုတ်ဘူး မေတ္တာသုတ်ကို ရည်ညွှန်းတာဆိုပြီး စကားပြောင်းသွားပြန်ရော။ စာလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ မေတ္တာပို့တာက မေတ္တာသုတ်နဲ့ ဘယ်လိုညီတာလဲလို့ မေးတာ မဖြေပဲ ပတ်ပြေးနေတယ်။ အဲဒါကိုပဲ မေးလွန်းမက မေးတော့ ချယ်ရီမြို့တော် တရားဓမ္မများ လိပ်စာကို ပေးတယ်။ အဲဒီဘလော့က သူ့ဘလော့တဲ့။ သူဟာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ပြသပါတယ်။ (သူအပြာတိုင်း ထေရ၀ါဒ ကိုထည့်ပြောပါတယ်။ အဲဒါလည်းထူးခြားချက်ပါပဲ) ကျွန်ကုလားတွေ အဲလောက်အရှက်နည်းပြီး လိမ်ညာမယ်လို့ မထင်ခဲ့တာ ကျုပ်ရဲ့အမှားပါ။ သူ့တောင် တောင်းပန်မိလိုက်သေးတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်တကြိမ်ပြန်သွားကြည့်တော့ မသင်္ကာဖွယ်ရာ အချက်တွေအများကြီးကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူရဲ့ ဘလော့ မှန်ကုန်မှုအပေါ်မှာ မေးစရာရှိတယ်။ ဘလော့လိပ်စာ မေ့သွားလို့ ပြန်တောင်းတဲ့အခါမှာတော့ လုံးဝမပေးတော့ပါဘူး။ ကျွန်ကုလား အလိမ်ပေါ်မှာ စိုး၇ိမ်ဟန်ပါပဲ။ အဲဒီဘလော့လိပ်စာကိုတောင်းထားတဲ့ ဆွေးနွေးခန်းကိုတော့ အောက်ဖက်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ဆုံးကနေ စဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျုပ်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုတော့ သူ့စာနဲ့ ရောမသွားအောင် အပြာရောင်ခြယ်ပြီး ပြောပါမယ်။ အထက်ကပုံကတော့ ကုလားက သူအဲလိုမပြောခဲ့ပါဘူးဆိုပြီး ဗြောင်လိမ်မှာကို မြင်ယောင်မိလို့ screen ရုပ်ပုံကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးခန်းအပြီးမှတော့ ကျွန်ကုလား တစ်ကောင် ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ မေတ္တာပို့နေတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုလားတွေ သိက္ခာမဲ့ပြီး အရှက်မရှိပုံကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
17 Sep 09, 02:35
(မေတ္တာအိုင်ဒီနဲ့ ရိုက်နေကျစာတွေကို မြတ်သူအိုင်ဒီနဲ့ ရိုက်ရင်း ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ကာ ကျန်ခဲ့ပါသည်)
17 Sep 09, 02:34
17 Sep 09, 02:33
မြတ်သူ: ကဲဇော်မျိုးမင်းလည်းလွတ်ရာကျွတ်ရာသွားပေတော့။ ငါလည်းမင်းကိုလျစ်လျူရှုတော့မယ်။
17 Sep 09, 02:32
မြတ်သူ: သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသက္ကာ
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ကဲကဲ.. သွားပြီကျွန်ကုလားရေ။ မင်းမှာအရှက်မရှိတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
နှစ်ကိုယ်ခွဲလုပ်မနေနဲ့။ ဆောင်းပါးရေးရမှာမို့ သွားပြီနော် ;) တာ့တာ
17 Sep 09, 02:31
မြတ်သူ: ဟုတ်ပါတယ်ကိုမေတ္တာ ကျွန်တော်လည်း ပထမတော့ ဥပေက္ခာပြုနေပါတယ်။ ဒီကလေးက ခေါင်းမာတော့လည်း ကျွန်တော်လည်းသူ့ဖြစ်သူခံပေါ့ဗျာ။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ဟိဟိ.. ကျေနပ်သွားပြီ။ ဆောင်းပါးလာမည်.. မျှော် :P
17 Sep 09, 02:30
မေတ္တာ: လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်နေတာပါ
17 Sep 09, 02:29
မေတ္တာ: ကိုမြတ်သူရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို အလကားဖြုန်းတီးမပစ်ပါနဲ့
(ကျွန်ကုလားရူးပြီး သူ့ကိုသူ ပြန်လည်ဖြေသိမ့်နေတဲ့အချိန်လေးပါ)
17 Sep 09, 02:28
17 Sep 09, 02:27
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မင်းဖာသာ ကြိုက်သလိုလုပ်တော့ ကျွန်ကုလားရေ။ အခုပြောဆိုထားတာတွေကို ဆောင်းပါးရေးတော့မယ်.. ဒန်..ဒန် :P
17 Sep 09, 02:26
မြတ်သူ: တစ်မှူးရလို့တစ်ပဲလှူ တို့ရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ရိုးလား။
(ကျွန်ကုလားရှုးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတာ ဒီမှာ စတင်ပြီး သတိထားမိတာဖြစ်ပါတယ်)
မေတ္တာ: ပညာမဲ့သူ၏ ချစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေပညာမဲ့သူ၏ ချစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ခွေးကုလားလိမ်ညာလို့ကို မပြီးတော့ဘူး။ မင်းတို့ကောင်တွေ ချေးစားခွေးထက်နိမ့်တဲ့မိုဟာမက်က မင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပဲ
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ငါတို့မြန်မာရှမ်းတွေက ကျွန်ကုလားတွေလို အောက်တန်းမကျဘူး
မြတ်သူ: ကျွန်ကုလားလည်းမဟုတ်ဘူး ကုလားလည်းမဟုတ်ဘူး ရှမ်း။ဗုဒ္ဓဘာသာ။
17 Sep 09, 02:24
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ကုလားမဟုတ်ဘူး။ မင်းက ကျွန်ကုလား။
မြတ်သူ: မင်းကရှမ်းကို ကုလားတဲ့။ မင်းမရှက်ဘူးလား။
17 Sep 09, 02:23
မြတ်သူ: ဘယ်သူ့ကိုပြောနေတာလဲ ငါကကုလားလား။
(ကျွန်ကုလားတွေ လိမ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာတောင် ဆက်လိမ်ချင်တယ်။ အရှက်နဲ့ သိက္ခာ မရှိတာ အဲဒါပဲကြည့်တော့)
17 Sep 09, 02:22
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မအေလိုး ခွေးကုလား မင်းတို့တွေ မြန်မာပြည်မှာနေရင် လူလိုနေ။ ကျောင်းမှာကတည်းက မွတ်ဆလင်တွေကို အနိုင်ကျင့်လာတဲ့ကောင်။ စောက်ချဉ်တော့မထင်နဲ့ :D
မြတ်သူ: အေးပါကွာဖြုတ်ပါကွာ ဟစ်တစ်လာတောင်ဂျူးတွေကိုသုတ်သင်တာ ကုန်သွားသတဲ့လား။မေတ္တာထားပါကွာ။
17 Sep 09, 02:21
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မှတ်ထား မြန်မာဆိုတာ စောက်ချဉ်မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့မျိုးဆက်သစ်တွေက ရှေးတုံးက နွားကြီးတွေလို စောက်တင်းပြောရန်ဖြစ်မယ် မထင်နဲ့။ ယုတ်ညံ့တဲ့မွတ်ဆလင်ကို အမြစ်ဖြုတ်မှာကွ
17 Sep 09, 02:20
မြတ်သူ: မင်းလွတ်ရာကျွတ်ရာသွားပေတော့။ ငါလည်းဥပေက္ခာဗြဟ္မစိုရ်နဲ့ပဲ ယှဉ်ပြီးနေလိုက်တော့မယ်။
မြတ်သူ: ကဲဇော်မျိုးမင်းကနလဗိန်းဒုန်းပဲ မင်းကိုငါလည်းကျန်တဲ့သူတွေလိုဘေးမဲ့ပေးပါ့မယ်ကွာ။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မအေလိုး ခွေးကုလား ဘယ်ရောက်နေလဲ?
17 Sep 09, 02:18
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: အေးပါကွာ.. ကျွန်ကုလားရာ။ မင်းကအရမ်းကိုတော်ပါတယ်။ မင်းဆီက ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆတွေကို ဆည်းပူးချင်လို့ မင်းရဲ့ဘလော့ လိပ်စာကိုပေးပါကွာ။
17 Sep 09, 02:17
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ကျွန်ကုလားလုပ်မနေနဲ့တော့။ မင်းပြောဆိုထားတာတွေ အားလုံး သိမ်းထားပြီးပြီ။ :D စောက်ရှက်မရှိတဲ့ကွန်ကုလား ဘာမှကွဲစရာ စောက်ရှက်မရှိပါဘူးကွာ
မြတ်သူ: ဟေ့ကောင်ဇော်မျိုးကိုမေတ္တာလာနေပြီ ငါကငါ ကိုမေတ္တာကကိုမေတ္တာ။
17 Sep 09, 02:16
17 Sep 09, 02:15
မြတ်သူ: ဟိတ်ကောင်မင်းနှောက်ယှက်တော့ ငါ့ဆီလာလည်တဲ့သူတွေ စိတ်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ဟေ့ကောင် ကျွန်ကုလား.. လုပ်ပါကွာ။ မင်းဘလော့လိပ်စာလေးပြန်ပေးပါဦး :P ပိတိကတ်ကျမ်းနဲ့အညီ မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့အဆင့်မှ မဟုတ်တာ :P
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မင်းဘလော့လိပ်စာကို ပေးရမှာ ဘာကြောင့်အဲလောက်အထိ ကြောက်နေတာတုံး? :D
17 Sep 09, 02:14
ဇော်မျိုး>မျိုးဆက်သစ်များ: တွေ့တယ်မဟုတ်လား။ ချေးစားတဲ့ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ မိုဟာမက်တပည့်တွေ စောက်ကျင့်ကို မှတ်သားထားပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအယောင်ဆောင်ပြီး ခွေးကျင့်ခွေးကြံလုပ်တာ အဲဒီကောင်တွေပဲ
မြတ်သူ: မနေ့ကချက်တော့ အစပိုင်းမှာ ငါ့ကိုစွပ်စွဲချင်သလိုစွပ်စွဲ ငါဘယ်သူလဲသေချာလည်းသိရော တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ ကြောက်ချေးပန်း။
17 Sep 09, 02:13
17 Sep 09, 02:12
မြတ်သူ: ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းအနှစ်အပိုင်းဆွေးနွေးမလားဆိုတော့လည်း အခြေခံတောင်မရှိ။ မေတ္တာပို့တာ မေတ္တာသုတ်တော်လာအတိုင်းပို့ကြတယ်ဆိုတာလည်း ပြောရတာမောပြီ။
ဇော်မျိုး>ဒီမိုနဲ့နအဖ: မအေလိုးကြီးတွေ မြန်မာအချင်းချင်းစောက်ရန်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီမှာ ချေးစားခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ ကျွန်ကုလား ဘယ်လိုလိမ်လဲ မင်းတို့တွေ့တယ် မဟုတ်လား?
17 Sep 09, 02:11
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ကျွန်ကုလားတွေကို ကျွန်လို့ခေါ်ရင် ရှက်ဟန်ဆောင်ပြီး ဒေါသထွက်နေတာပါ။ Abdul Ali, Abdullah , Abdus Shafi , Abdul Azeez စတဲ့ “ကျွန်” လို့ အဓိပါယ်ရှိတဲ့နာမည်တွေ သုံးနေပြီး ပဲမများနဲ့ :D
17 Sep 09, 02:10
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ဟာဗျာ။ မင်းရဲ့ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘလော့လိပ်စာကြီးပေးပါကွာ။ ငါက ဘယ်လိုအနှောင့်အယှက်ပေးမှာ စိုးရိမ်တာတုံး? ကျွန်ကုလားရယ် :P
မြတ်သူ: တကယ်တမ်း ဗလီကိုဂဲနဲ့သွားပေါက်ပါလားဆိုတော့ ကြောက်ချေးပါပြီး အဝေးကသာလေသေနတ်ပစ်တတ်သူတစ်ဦး။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မင်းရဲ့ဘလော့လိပ်စာကို ပြန်ပေးပါ.. ဒန်..ဒန်..ဒန် :P
17 Sep 09, 02:09
မြတ်သူ: ဟိုရှေးပဝေနသီက ပဋိပက္ခတွေ(မင်းတောင်မမွေးသေးဘူးထင်ပ) ဟာတွေကို ချီးခြောက်ရေနူးပြီး အစစွဲထုတ်နေတဲ့သူတစ်ဦး။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ဟေ့ကောင် ကျွန်ကုလား.. လုပ်ပါကွာ။ မင်းဘလော့လိပ်စာလေးပြန်ပေးပါဦး :P
17 Sep 09, 02:08
ဇော်မျိုး>မျိုးဆက်သစ်များ: တွေ့တယ်မဟုတ်လား။ ချေးစားတဲ့ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ မိုဟာမက်တပည့်တွေ စောက်ကျင့်ကို မှတ်သားထားပါ
ဇော်မျိုး>မျိုးဆက်သစ်များ: မင်းဘလော့လိပ်စာကို ပေးရမှာ ဘာကြောင့်အဲလောက်အထိ ကြောက်နေတာတုံး? :D
မြတ်သူ: ဇော်မျိုးဆိုတဲ့ကောင်ဟာ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး။ ဘာသာရေးကိုအခြေခံတောင်နားမလည်တဲ့သူတစ်ဦး။
17 Sep 09, 02:07
17 Sep 09, 02:06
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ကျွန်ကုလား.. လုပ်ပါကွာ။ မင်းဘလော့လိပ်စာလေးပြန်ပေးပါဦး :P
မြတ်သူ: မင်းဖာသာမင်းမွတ်ဆလင်ကိုနှိပ်ကွပ်ချင်ရင်နှိပ်ကွပ်ဒါမင်းအပိုင်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနောက်ခံပေးပြီးဆဲရေးတိုင်းထွာတော့ ငါတို့ဂေါတမမြတ်စွာက အဆဲခံရတယ်။ဒါမင်းနားလည်။
(ကျုပ်တို့မြန်မာတွေ ဂေါတမြတ်စွာဘုရားလို့ သုံးနှုံန်းတဲ့သူမရှိပါဘူး။ အရင်ပွင့်ခဲ့တဲ့ ဘုရားတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြောရတဲ့အချိန်မျိုးမှာမှ ဂေါတမဘွဲ့တော်ကို အသုံးပြုတာပါ)
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မင်းပေးတဲ့ဘလော့က ဘယ်လောက်စစ်မှန်လဲဆိုတာ စမ်းစစ်ကြရတာပေါ့ကွာ :cool:
17 Sep 09, 02:05
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ဒေါသကြီးလှချည်လား တရားသမားကြီးရာ။ ကဲပါ မင်းဘလော့လိပ်စာပြန်ပေးပါဦး ။ ကျွန်တွေစိတ်ဆိုးရင် ငါက ရယ်ချင်တာပဲရှိတယ်နော်။ မချော့တတ်ဘူး :P
17 Sep 09, 02:04
မြတ်သူ: မင်းကိုတိုက်တွန်းနေတာက ငါတို့ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုနောက်ခံထားပြီးဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းပြုနေလို့ပဲ။
17 Sep 09, 02:03
17 Sep 09, 02:02
မြတ်သူ: ဇော်မျိုး ငါသည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး။ မြန်မာလူမျိုး။ မင်းနဲ့စကားပြောရတာက ငါ့ကိုမစွပ်စွဲဖို့ ။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ဟာဗျာ။ ဘယ်လိုအနှောင့်အယှက်ပေးမှာ စိုးရိမ်တာတုံး? ကျွန်ကုလားရယ် :P
17 Sep 09, 02:01
17 Sep 09, 02:00
မြတ်သူ: ဒါမလိုအပ်တော့ဘူး ငါဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းသိဖို့ပဲ ပေးလိုက်တာ။ ငါရဲ့ထေရ၀ါဒဘလော့ကိုတော့ အနှောက်အယှက်မခံနိုင်ဘူး။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ဒေါသကြီးလှချည်လား တရားသမားကြီးရာ။ ကဲပါ မင်းဘလော့လိပ်စာပြန်ပေးပါဦး
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မိန်းခလေးများကို လှည့်ဖျားဖို့ church ကိုသွား၏။ ရွှေတိဂုံဘုရားကို ဟန်ဆောင် ရှိခိုး၏။ ချေးစားခွေးထက် ယုတ်ညံ့သောသူမှာ မွတ်ဆလင်များသာဖြစ်ပေသည်။ ယောကျားစစ်စစ်ဖြစ်ပါလျက် တန်ဖိုးမရှိပေ. . ;)
မြတ်သူ: ငါဘယ်သူလဲမင်းသိပြီးသား။ မင်းငါ့ကိုစွပ်စွဲနေတာလျှော့တော့ဇော်မျိုး။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: ကျွန်တွေစိတ်ဆိုးရင် ငါက ရယ်ချင်တာပဲရှိတယ်နော်။ မချော့တတ်ဘူး :P
17 Sep 09, 01:58
17 Sep 09, 01:57
မြတ်သူ: မင်းမဆိုင်တာမပြောနဲ့ ငါမှာမြတ်သူနမည်တစ်လုံးပဲရှိတယ်။ မင်းသာ အိုင်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့မရိုးမသားသခိုးကျင့်သခိုးကြံပြီး သူတစ်ပါးကိုလိုက်ကဲ့ရဲ့နေတဲ့ဇော်မျိုး။
ဇော်မျိုး>ကျွန်မြတ်သူ: မင်းရဲ့ဘလော့လိပ်စာပြန်ပေးပါဦး ;)
ဒီကနေစဖတ်မယ် ဒန် ဒန် ဒန်